Download indaba ephathwayo Rikoooo Windows 7 December 2011 - Rikoooo
Usayizi 194 MB
Play 6 557
Ngoba isihloko iyahambisana Windows 98, 2000, XP futhi Vista 32 bakhetha 64 izingcezu Chofoza lapha
I-Windows Theme uzothola nawe kuyinto ephelele indaba ephathwayo. It isekela zonke izinguqulo Windows 7 (ngaphandle Windows 7 Starter). Iqukethe slideshow skrini kusuka Flight Simulator, kanye nezithombe zangempela esekelwe zezindiza wokuhamba a oda ngokuphelele okungahleliwe njalo ngemizuzu 20.
Lesi sihloko futhi lishintsha Windows yakho isiqalo-up kanye nemisindo kokuvala. Jabulela ukuzwa umsindo elimnandi A320 ukuthatha off kanti umsindo injini jet ukuthi sithule. Futhi, uma ngithululele kadoti, uyolizwa umsindo kuphahlazeka indiza (kuhleleke).
Isihloko sizoshintsha imifanekiso kwideskithophu, like udoti futhi kadoti ogcwele, ifolda lakho lomsebenzisi, isithonjana Network, futhi esikhundleni sawo icons nxazonke indaba ephathwayo zezindiza. isithombe Your umsebenzisi kungabuye esikhundleni selithi omunye rikoooo (uyazikhethela).
Ungengeza futhi inkambiso Screensaver (Optional), equkethe slideshow zesikrini ukuthi akazange abe ambikele amavoti kusuka concours.
Futhi emva kwalokho, ufuna more? Well, kungenzeka, ngoba ungakwazi ukushintsha login yakho screen Windows (Uyazikhethela) abakhethwe Top Screen emncintiswaneni.
Futhi ekugcineni, ungakwazi futhi (uyazikhethela) buyisela mouse umcibisholo!
Siyabonga kubo bonke abahlanganyeli of the Theme:
Imiphumela Yokulungisa Ithuluzi FSX & P3D & FS9 2.3
Theme Rikoooo Windows 98 + January 2012